पहिलो कुरा त संघीयता र समावेशीता लोकतंत्र, मानव अधिकार र गणतंत्र जस्ता सिद्धांत हुन। सिद्धांत ले क्रांति गर्छ र विजय प्राप्त गर्छ। नेपालमै पनि सिद्धांत कहिले जनमत संग्रह मा गएको छ? २०४६ मा कुन जिल्ला बहुदलमा जाने कुन निर्दलमा बस्ने भनेर जनमत संग्रह भएको हो?
दोस्रो कुरा गणतंत्र मा जाँदा राजा को कुन नाता कुटुंब को चित्त दुख्यो, कुनको दुखेन भनेर सर्वेक्षण गरिएको हो? चित्त दुखेका हरु लाई भत्ता को व्यवस्था गरिएको हो? थामथुम पारिएको हो? संघीयता र समावेशीता खस समुदाय का लागि आएको हुँदै होइन, खस समुदाय का कारणले आएको हो। खस को चित्त नदुखाउने गरी सीमांकन गर्ने आईडिया कहाँ बाट आयो? मलाई त केही छैन तर मेरो फुफुले मानेको छैन त्यसकारण गणतंत्र मिल्दैन भन्दै ज्ञानेन्द्रले लिडे ढिपी गरेका हुन? केंद्र सरकारमा ३०% जनसंख्या रहेको खस, अझ ७% जनसंख्या रहेको बाहुन पुरुष को ९०% उपस्थिति ले मर्का पार्यो भनेर न संघीयता र समावेशीता मा गईएको हो? भने पछि आरक्षण मा खस को लागि ठाउँ बन्दैन। बन्यो, बेइमानी भयो. त्यो हटाउनु पर्यो। संघीयता को सीमांकन र नामांकन मा खस लाई के पाइक पर्छ के पाइक पर्दैन भन्ने सोच्ने कुरा आउँदैन। एक मधेस दो प्रदेश मधेसी र थारु का लागि चाहिएको हो। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस को केंद्र स्तरमा चाहिने भन्दा बढ़ी प्रतिनिधित्व छ। संघीयता मा केंद्र सरकार अझ निकै बलियो नै रहन्छ। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस को प्रदेश सरकार मा एक व्यक्ति एक मत सहभागिता कसैले खोसेर लाँदैन। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस को स्थानीय सरकार मा एक व्यक्ति एक मत सहभागिता कसैले खोसेर लाँदैन।
तेस्रो, अरु कुनै समुदाय बारे यति सार्हो चिंता छैन। मगर लाई कुन राज्यमा बस्ने भनेर सोध्ने आईडिया प्रस्तुत गरिएको छैन। मगर र खस बीच यति सार्हो भेदभाव किन? त्यही भेदभाव हुने गरेकोले नै संघीयता र समावेशीता चाहिएको हो।
चौथो, एक मधेस दो प्रदेश मा जाने हो भने झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर का खस हिंसा मा ओर्लिन्छन् भन्ने चेतावनी ले के संकेत गरेको हो? सीमांकन बारे आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न मधेसी ले अहिंसात्मक आंदोलन गर्ने, खस ले हिंसाको चेतावनी दिनुपर्ने कारण के हो?
Labels: Constituent assembly constitution dinesh prasain federalism Madhesh madhesi madhesi kranti3Nepal Terai